Otú nyefee Movies si iPad ka iTunes Mfe
> Resource> iPad> Nyefee Movies si iPad ka iTunes nwere ike Ya mere Easy
Ị na-achọ a ụzọ nyefee fim iPad ka iTunes? Videos na ị na weghaara na iPad ka kpọmkwem ibudata iPad na Internet-apụghị synced ka iTunes. iTunes nanị na-ahapụ gị nyefee fim iTunes ka iPad, ọ bụghị otú azụ. Na nke a, ọ bụrụ na ị mkpa n'ezie nyefee fim iPad ka iTunes onwe elu ohere, ị ga-agbalị Wondershare TunesGo. Ọ bụ ihe kasị mma iTunes enyi idetuo fim iPad ka iTunes. Ugbu a ọ na-akwado ndị ọhụrụ itunes 11. naanị na 2 nzọụkwụ, ị ga-nweta ihe mgbaru ọsọ gị.
Gbalịa Wondershare TunesGo ugbu a! Ọ bụ ọrụ ọma na Windows 8, Windows 7, Windows XP, na Windows Vista dabeere kọmputa.
Nzọụkwụ 1. Run MobileGo na jikọọ na iPad na PC
Mgbe nbudata a usoro na PC gị na, ị nwere ike wụnye ya. Ugboro abụọ pịa akara ngosi "Wondershare TunesGo" na gị na PC na desktọọpụ. Mgbe ahụ, jikọọ gị iPad na PC site eriri USB. MobileGo ga chọpụta ya na-akpaghị aka ka ogologo dị ka ọ na-ejikọrọ.
Cheta na: Biko wụnye iTunes tupu ị na-agbalị TunesGo. A na ngwa na-arụ ọrụ mgbe iTunes arụnyere.
Nzọụkwụ 2. Export fim iPad ka iTunes
Ugbu a, pịa bọtịnụ "Media" na n'aka ekpe ebi ndụ. Mgbe ị na-abịa media window, ị ga-ahụ na e nwere akara ke n'elu. Pịa "Movies", nke abụọ button, iji bugote fim management window. Mgbe ahụ họrọ gị chọrọ fim, na pịa obere triangle n'okpuru button "Export ka". A esiri-ala ndepụta egosi. Họrọ "Mbupụ na iTunes Library". Mgbe ahụ usoro ihe omume ga-amalite nyefee fim. N'oge na fim na-ebufe, ị ga mma na-gị iPad ejikọrọ ruo mgbe ị rụchaa ebufe.
TunesGo bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na niile iPads: iPad Obere, iPad na Retina Ngosipụta, The ọhụrụ iPad, iPad 2 na iPad. Mgbe ebufe, ị pụrụ ịchọta na i kpaliri fim iPad ka iTunes. Ugbu a, ị na-adịghị mkpa ka nchegbu banyere ihichapụ ihe nkiri na gị iPad. N'ezie, e wezụga ebufe fim iPad ka iTunes, ị pụrụ ọbụna iṅomi ha ka ha PC, na Anglịkan.
Olee otú Download Music si iPad ka laptọọpụ